Patty Berg: I-Biography kunye neNkcazo yeCandelo
UPatty Berg wayengomnye woovulindlela begalufu yegalufu yabasetyhini, kwaye nanamhlanje kuthiwa unamathuba amaninzi kwizikhundla zabasetyhini kunanoma yintoni enye i-golfer.
Umhla wokuzalwa: Feb. 13, 1918
Indawo yokuzalwa: iMinneapolis, eMinnesota
Umhla wokufa: Septemba 10, 2006
Ukutshatyalaliswa koKhenketho: 60 ( Qaphela: umsebenzi weBerg waqala kakuhle phambi kokusungulwa kweLPGA Tour, kodwa uhambo lubala amaninzi kulawo mahlulo angaphambili njengeLPGA yezokutyelela iLPGA.)
I-US Women's Open: 1946
IWest Open: 1941, 1943, 1948, 1951, 1955, 1957, 1958
Abanikazi bamatyala: 1937, 1938, 1939, 1948, 1953, 1955, 1957
I-Amateur yase-US yamakhosikazi: 1938
Ilungu, iNew Sports Sports Hall of Fame
I-Associated Press yabasetyhini bonyaka, 1938, 1943, 1955
I-LPGA Inkokheli yemali ye-Tour 1954, 1955, 1957
I-LPGA Tour ijonge i-1953, 1955, 1956
Ilungu, iqela le-US Curtis Cup , ngo-1936, 1938
I-World Golf Hall of Fame icaphuna uCarol Mann esithi uPatty Berg "ngumntu onolwazi, indoda okanye ibhinqa, olwahlukileyo lwegalufa ede ndiyazi."
UPatty Berg: "Akukho nto kulo mdlalo wegalufa engenakuphuculwa xa usebenza."
UPatty Berg: "Qhubeka ufunda.
UPatty Berg: "Gubungula isandla, yenza umhlobo."
Ngo-1951, iBerg yahokela iqela labaqeqeshi beLPGA Tour ukuya eNgilani ukuze badlale umdlalo we- Ryder Cup -style ngokumelene nabaviwa kwiqela leBhola laseBrithani. UBerg kunye nabalingani bakhe beBee Didrikson Zaharias , iBetsy Rawls , uPeggy Kirk, uBetty Jameson kunye noBetty Bush banqobile ukhuphiswano, 6.5 ukuya ku-2.5.
I-Berg yafumana i-US yokuqala ye-Women's Open edlalwa, ngo-1946.
Iingqungquthela zayo eziphezulu ezili-15 zengqungquthela yirekhodi yabasetyhini.
I-red-hair, ye-Midwesterner ye-Midwesterner Patty Berg yayisinye sezixhobo zokuqhuba ukukhula kwegalufa yabafazi phakathi ne-20 leminyaka. Yaye ubomi bakhe bonke, wahlala engummeli kumdlalo ayithandayo.
UBerg wayeyindoda enomntwana, edlala ibhola e-Minneapolis, eMnn., Ummelwane apho abahlobo bakhe baquka umqeqeshi weBhola weFame yeFame uBol Wilkinson. Wathatha igalofu eneminyaka eyi-13 kwaye ngo-1934, eneminyaka eyi-16 ubudala, wanqoba ubuphiswano bezobuxeko.
Ukubonakala kwakhe kokuqala kwinqanaba likazwelonke lafika ngo-1935, xa efikelele ekupheleni kwe -Amateur yase - US njengabantwana abaneminyaka eyi-17, ngaphambi kokulahlekelwa nguGlenna Collett Vare .
UBerg wamphumelela kobungqina bakhe bokuqala, i-1937 Abaphathi beSihloko, njengesiqhelo. Uza kunqoba abaSebenzi beeNtloko ngokuphindwe kwezihlandlo ezisixhenxe, ukuza kokugqibela ngo-1957. I-Berg nayo yanqoba iWestern's Western Open ephindwe kasikhombisa, ngowokuqala ngo-1941 kwaye iphelile ngowama-1958. Le ngxelo i-14 yezikhundla zayo eziziintloko ezi-15, enye enye Ngowe-1946 I- US Women's Open Open - kunyaka wokuqala wokudlala umdlalo.
UBerg waphendukela kwiprogram ngo-1940, kodwa xa iMelika ingena kwiMfazwe Yehlabathi II yajoyina iMavy kwaye yakhonza eMarines kwaze kwaba ngo-1945, isebenza njengegosa lokuqesha.
UBerg wadlala ngokugqithiseleyo kwiholide ye-Women's Professional Golf Association (WPGA), umlandeli we-LPGA. Uncedise ukufumanisa i-LPGA ngo-1950 kwaye yenziwa njengomongameli wayo wokuqala.
Kule minyaka, uBerg wancintisana ngenkathi ekhusela i-US ngemoto eqhuba iiklinikhi egameni leWilson Sporting Goods.
Ngokulinganisela kwakhe, uBerg wayekhokela iikliniki ezingaphezu kwe-10,000 ebomini bakhe. Kwaye wayaziwa ngokuba nazo zonke izibhokolo ngokwakhe. U-Berg wayengelona lixesha elide, kodwa wayenomdlalo omncinci kwaye wayaziwa njengomnye wabadlali abathandekayo.
I-Berg yayisisigqeba esikhulu kule nqanaba yokuqala kwiminyaka elishumi yokuqala yeLPGA Tour, ukuzuza ama-majors, izihloko zemali kunye nezihloko. Ukuphumelela kwakhe kokugqibela ngeholide kwakunye ngo-1962, kodwa waqhubeka edlala umdlalo weso sihlandlo nangona emva kokuhlinzwa komhlaza ngo-1971. Ukubonakala kwakhe kokugqibela ekuhambeni akuzange kufike ngo-1980 xa wayeneminyaka engama-62. zakhe iipiksi.
Kodwa uBerg akazange ayeke ukudlala igalufu kunye nabahlobo kwaye waqhubeka evuyela umdlalo wakhe kwiminyaka engamashumi asixhenxe. Waqhubeka nokuseka nokufundisa kwiiklinikhi zegalufu emhlabeni jikelele.
I-LPGA izibhengezo zonyaka i-Patty Berg Award, eyasungulwa ngo-1978, "kwintombazana yegolfer eyenze igalelo elikhulu kwigalufa yabasetyhini kunyaka."
UBerg wayengomnye wamalungu okuqala e-Women's Golf Hall of Fame ngowe-1951 kwaye wayekho kwiklasi yokuqala ehanjiswe kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama ngo-1974.
Isingeniso kwiNgxelo zeJamani
Amazwe amancinci kwihlabathi
Iziqalo ezibonakalayo zamaNumeri aseRoma
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: Ukuqwalasela